महासंघपछि बारमा नेकपालाई पछार्दै कांग्रेस ? « Pahilo News
महासंघपछि बारमा नेकपालाई पछार्दै कांग्रेस ?
प्रकाशित मिति :3April, 2019 3:28 pm
काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरेर नेकपा बनेयता लगभग सवैजसो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पाखा लाग्दै आएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा दुई तिहाईको सहज शक्ति आर्जन गरेको नेकपाले राज्य संयन्त्र नै पूरै आफ्नो वैधानिक नियन्त्रणमा राखिसकेको छ ।
संवैधानिक निकायदेखि न्यायलयसम्ममा नेकपाको बर्चस्व कायम रहेको तथ्य देखिदै आएको छ । तर, केही यस्ता निर्वाचन पनि भइसके । जसमा दुई पार्टी मिलेको नेकपा र यससँग जोडिएको गठबन्धनलाई समेत कांग्रेसले चुनौति दिएको छ ।
जस्तो– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ । नेकपाका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै कांग्रेसका रबि सिंहले निर्वाचन जितेका थिए । धेरैलाई चकित तुल्याउदै लोकतान्त्रिक शक्ति अझै बलियो रहेको प्रमाणित निर्माण व्यवसायीहरुले देखाएका थिए ।
अहिले फेरि नेपाल बार एसोसियनको मतगणना जारी छ । र, तेस्रो दिनसम्मको परिणामअनुसार लोकतान्त्रिक प्यानलको अग्रता कायमै छ ।
पछिल्लो मतपरिणामअनुसार लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अध्यक्षका प्रत्यासी सुनिल पोखरेल ७८ मतले अगाडि छन् । पोखरेलले १ हजार ४ सय ३१ ल्याएका छन् भने प्रगतिशील प्यानलबाट अध्यक्षको प्रत्यासी बनेका चण्डेश्वर श्रेष्ठले १ हजार ३ सय ५३ मत ल्याएका छन् । अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरुमा पनि लोकतान्त्रिककै अग्रता छ ।
निर्वाचन समितिका अनुसार इलाम, झापा र विराटनगरको मतगणना सकिएको छ । अब कैलाली, कञ्चनपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दाङ घोराही र काठमाडौं उपत्यकाको मत गन्न बाँकी छ ।
गत शनिबार भएको निर्वाचनमा १० हजार ३ सय १३ मतदाता मध्ये ८ हजार ३ सय २९ मत खसेको थियो । स्रोतका अनुसार उपत्यकाको मत निर्णायक हुनेछ । त्यसैले अहिले नै यसै भन्ने अवस्था भने छैन ।